“Fisandratana 2030” : Tohanan’ny mponin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany -
AccueilSongandina“Fisandratana 2030” : Tohanan’ny mponin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany
“Fisandratana 2030” : Tohanan’ny mponin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany
12/03/2018 admintriatra Songandina 0
Notanterahina tao amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany (V7V), Mananjary sy Manakara, ny Rodoben’ny Fisandratana, izay nentina nanamarihana ny fetin’ny vehivavy, tamin’ny herinandro lasa teo. Ny minisitra coach, minisitry ny Fitaterana sy Famantarana ny toetr’andro (MTM), Beboarimisa Ralava, no nitarika izany natrehin’ireo olom-panjakana ambony sy olom-boafidy tany amin’ireo toerana roa ireo.
Tomefy olona ny tanàna tamin’izany, ary dia tena nifanitsa-kitro mihitsy aza. Sambany ihany koa, raha ny fanazavana no nisian’ny hetsika toa iny tany Mananjary sy Manakara iny. Voaporofo, araka izany, fa manohana ny vinan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ilay “Fisandratana 2030” ireo vehivavy any amin’iny Faritra Vatovavy Fitovinany iny. Tsy ireo vehivavy ihany anefa fa ny mponina rehetra any an-toerana mihitsy no manohana ilay vinan’ny Fitondram-panjakana.
Raha nandray fitenenana tany amin’ireo toerana roa ireo ny minisitra Beboarimisa Ralava, dia nilaza fa efa manomboka misandratra ny firenena ankehitriny. Izany indrindra, hoy izy no ilàna ny fifanomezan-tanan’ny tsirairay hoenti-mampandroso ny firenena sy ny amin’ny faritra misy azy tsirairay.
Ankoatra izay, nanolotra omby telo ho an’ny mponin’i Mananjary kosa ny vadin’ny Filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina, tamin’ny alalan’ny minisitra mpiahy ny Faritra Vatovavy Fitovinany.
Ny andron’io ihany, dia nikisaka nihazo an’i Manakara ny minisitra Beboarimisa Ralava rehefa tontosa soa aman-tsara ny fankalazana tao Mananjary. Tototr’olona ihany koa ny lalana rehetra tao an-tampon-tanànan’i Manakara tamin’ny alalan’ny “carnaval”.
Nandritra izany no nitokanana ilay von-toeram-pialamboly tany an-toerana, izay natolotry ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ho an’i Manakara. Ahitana toeram-pilalaovana volley sy basikety izany. Misy efitrano manokana ho an’ny fitaizam-batana toa ny “fitness” sy “musculation” izay avy hatrany dia miaraka amin’ny fitaovana rehetra fampiasa amin’izany. Ahitana cyber ihany koa izay maimaim-poana ny “connexion internet”. Ankoatra izay, dia nambaran’ny minisitra Beboarimisa Ralava fa manana anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena ny vehivavy. Noho izay indrindra, voalaza fa manohana ny vinan’ny “Fisandratana 2030”-n’ny Filohan’ny Repoblika ihany koa ireo mponin’i Manakara.
Mody manao ho “victime” sy miezaka maka ny fon’ny vahoaka na dia izy izao aza no diso. Io no tetikadin-dRavalomanana, entiny hamitahana fanintelony ny vahoaka. Vaky bantsilana io teti-dratsiny io amin’izao fotoana. “ Izaho nanara-dalàna ...Tohiny
Michaëlle Jean:NANKASITRAKA NY EZAKA VITAN’NY FITONDRANA